Puntland oo markale xirtay Siyaasi dhaliilay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Puntland oo markale xirtay Siyaasi dhaliilay
Ciidamada Booliska Dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa ay markale Xabsiga dhigeen Siyaasiga Dr. Muuse Cali Jaamac oo Caan ka ah deegaannada maamulkaas.
Siyaasiga iyo Odayaal kale ayaa Jimciii la soo dhaafay waxaa ay dhaliilo kala duwan u jeediyeen xukuumadda Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu hoggaamiyo,waxaana xalay uu ku hoyday Xabsiga Magaalada Boosaaso,sida ay xaqiijiyeen dad ku sugan boosaaso.
Horay ayaa Ciidamada Puntland mar u xireen Siyaasiga 13-kii Bishii October ee sannadkan,kadib markii uu dhaliilay Xukuumadda Madaxweyne Deni,hayeeshee markii dambe lagu siidaayey cafis-maxkamadeed.
Tan iyo markii Puntland loo doortay Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa deegaannada Maamulkaas ka bilaawday in la xiro qaarkoodna loo caga jugleeyo dadka kasoo horjeeda Siyaasada Maamulkaas.
Dhageyso:-Laftagareen oo u digay dadka diidan Maamulkiisa